OnePlus 3, ny fandikana voalohany dia miseho | Androidsis
Mandeha haingana dia haingana ny teknolojia fa tsy misy isalasalana ary, eo amin'ny tsenan'ny smartphone dia lasa zatra mahita terminal vaovao manolo ny hafa isika, isan-taona. Ny indostrian'ny finday dia iray amin'ireo indostria misy ny fampandrosoana faran'izay betsaka ary koa ny fandefasana fitaovana betsaka indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ny OnePlus dia naseho nandritra ny taona 2014 niaraka tamin'ny OnePlus One, izay fitaovana voalohany avy amin'ity mpanamboatra sinoa ity. Nandritra ity taona 2015 ity, ny orinasa dia nandefa ny taranaka faharoa an'ny fitaovany vaovao, ary koa ny kinova kely eo afovoany, antsoina hoe OnePlus X, izay tena manomboka androany kinova voafetra vita amin'ny seramika.
OnePlus dia te-ho lasa iray amin'ireo mpanamboatra lehibe any Shina, toa an'i Xiaomi, Meizu na LeTV. Ireo orinasa ireo dia mamolavola ny fitaovany manokana, ary koa ny rindrambaiko ananany, eo ambanin'ny Android. Ny mpanamboatra sinoa dia nivoatra be hatramin'ny nanombohan'ny terminal voalohany ary porofon'izany ny fahitana ny kinova kely an'ny OnePlus, fitaovana iray izay manintona kokoa noho ny OnePlus 2 mihitsy.
Fanontana voalohany an'ny OnePlus 3
Araka ny efa nolazainay, mandroso haingana ny teknolojia ary na dia mbola aloha loatra aza ny fahalalana ny antsipiriany voalohany amin'ny terminal fahatelo an'ny OnePlus terminal dia efa fantatsika ny fandikana voalohany ny fitaovana ho avy. Amin'ity dia hitantsika ny fomba itovizan'ny OnePlus 3 amin'ny OnePlus 2. Eo aoriany dia ahitantsika ny fakantsary eo akaikin'ny tselatra misy feo roa, ho fanampin'ny logo an'ny orinasa. Eo aloha dia hitantsika ny fomba fihodinan'ny volo fotsy / volondavenona iray manontolo.
Amin'ity ampahany voalohany ity dia ahitantsika ny iray amin'ireo tsy fitoviana misy eo amin'ny terminal faharoa miaraka amin'ny terminal fahatelo ary izany no miteny. LIreo mpandahateny dia nafindra avy any aoriana ka hatrany aloha. Tsy zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny telefaona finday io, fa vao sambany izahay mahita telefaona marika sinoa misy mpandahateny eo aloha.
Mikasika ny fitaovany, dia mbola aloha loatra ny hahafantarana tsara satria zara raha misy tsaho sy fivoahana momba ilay fitaovana, saingy azontsika atao ny mieritreritra fa ny ho avy OnePlus 3 dia mety hampiditra ilay processeur farany novokarin'i Qualcomm, ilay Snapdragon 820ary koa ny efijery azonao tazonina ao amin'ny 5'5 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 1920 x 1080 teboka. Ity fitaovana ity dia tokony hahita ny jiro fahavaratra 2016, noho izany dia hitandrina ny fahatongavan'ny fivoahana sy ny fandikana ilay fitaovana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus 3, ny fandikana voalohany dia miseho
Elephone M3 PRO, miaraka amin'ny sensor Android 6.0 sy Sony IMX230